परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु | अंश १४२ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु | अंश १४२
कस्ता किसिमका विशेषताहरूले मानिसमा शैतानको कामलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? तिमीहरूले यो कुरा तिमीहरूका आफ्नै अनुभवहरूद्वारा सिक्‍न सक्‍नुपर्छ—यो चाहिँ शैतानलाई सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसले बारम्बार गर्ने काम, त्यसले प्रत्येक मानिससँग गर्ने प्रयास गर्ने काम हो। सायद तिमीहरूले यो विशेषता देख्‍न सक्दैनौ, त्यसैले तिमीहरूले शैतान डरलाग्दो र घृणास्पद छ भनी महसुस गर्दैनौ। यो विशेषता के हो भन्‍ने कसैलाई थाहा छ? (त्यसले जे पनि गर्छ, मानिसलाई हानी पुर्‍याउन गर्छ।) कसरी त्यसले मानिसलाई हानी पुर्‍याउँछ? के तिमीहरू मलाई अझ निश्‍चित रूपमा र अझ विस्तृत रूपमा बताउन सक्छौ? (त्यसले मानिसलाई लोभ्याउँछ, प्रलोभन देखाउँछ र परीक्षा गर्छ।) त्यो सही कुरा हो; यो विशेषता प्रकट हुने विभिन्‍न तरिकाहरू यिनै हुन्। शैतानले मानिसलाई भ्रममा पार्ने, आक्रमण गर्ने र दोष लगाउने पनि गर्छ—यी सबै प्रकटीकरणहरू हुन्। के अरू पनि छन्? (त्यसले झूट बोल्छ।) शैतानलाई चोर्न र झूट बोल्‍न स्वाभाविक रूपमा नै आउँछ। त्यसले यी कुराहरू यति निरन्तर रूपमा गरिरहन्छ कि त्यसको मुखबाट विना कुनै सोचविचार झूट निस्कन्छ। के अझ अरू कुराहरू छन्? (त्यसले मतभेद रोप्‍छ।) यो त्यति धेरै महत्वपूर्ण छैन। अब म तिमीहरूलाई केही कुरा वर्णन गर्नेछु, जसले अन्तमा तिमीहरूको रौँ ठाडो बनाइदिनेछ तर तिमीहरूलाई तर्साउनलाई म यो गर्दिन। परमेश्‍वरले मानिसमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँले मानिसलाई आफ्नो स्वभाव र आफ्नो हृदयमा हेरचाह गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर, के शैतानले मानिसलाई हेरचाह गर्छ? गर्दैन, त्यसले मानिसलाई हेरचाह गर्दैन। यसको विपरीत, त्यसले धेरैजसो समय मानिसलाई हानी पुर्‍याउने कुरा सोचिरहन्छ। के त्यसले यस्तो गर्दैन त? जब त्यसले मानिसलाई हानी पुर्‍याउने विषयमा सोचिरहन्छ, के त्यसको मन आतुरीमा हुँदैन त? (हो।) त्यसैले मानिसमा शैतानले गर्ने कामको बारेमा विचार गरिरहँदा, मसँग शैतानको द्वेषपूर्ण र दुष्‍ट स्वभावलाई राम्ररी वर्णन गर्ने दुई वटा वाक्यांशहरू छन्, यसले शैतानको घृणालाई बुझ्‍न तिमीहरूलाई साँच्‍चिकै सहयोग गर्नसक्छ: शैतान मानिसको नजिक आउँदा त्यसले सधैँ हरेक मानिसलाई यति हदसम्‍म जबरजस्ती आफ्नो बनाउन र वशमा राख्‍न चाहन्छ कि त्यसले मानिसलाई पूर्ण रूपमा अधीन गर्न सक्छ र त्यसले मानिसलाई ठूलो हानी पुर्‍याउन सक्छ, ताकि त्यसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकोस् र आफ्नो दुष्‍ट अभिलाषा पूरा गर्न सकोस्। “जबरजस्ती कब्जा” गर्नु भनेको के हो? के यो तेरो सहमतिमा हुने कुरा हो, कि तेरो सहमति विना हुने कुरा हो? के यो तँलाई थाहा हुने गरी हुन्छ कि तँलाई थाहा नहुने गरी हुन्छ? जवाफ चाहिँ यो तँलाई पूर्ण रूपमा थाहै नहुने गरी हुन्छ! यो तँलाई थाहा नभएको परिस्थितिमा हुन्छ, सायद त्यसले तँलाई केही नभनीकन वा केही नगरिकन, कुनै आधार विना, कुनै सन्दर्भ विना—शैतान तेरो वरिपरि घुमिरहन्छ, तँलाई घेरिरहन्छ। त्यसले शोषण गर्ने अवसर खोजिरहन्छ र त्यसपछि त्यसले तँलाई जबरजस्ती कब्जा गर्छ, तँलाई आफ्नो बनाउँछ, तँलाई पूर्ण रूपमा अधीन गर्ने आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्छ र तँमाथि पीडामय हानी ल्याउँछ। मानिसलाई परमेश्‍वरबाट टाढा लैजान संघर्ष गर्ने क्रममा शैतानको सबैभन्दा सामान्य अभिप्राय र आचरण यही हो। जब तिमीहरूले यो सुन्छौ तब तिमीहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ? (हाम्रो हृदयमा त्रासित र भयभीत।) के तिमीहरू घृणाको महसुस गर्छौ? (गर्छौं।) यो घृणाको महसुस गर्ने क्रममा, के शैतान लाज नभएको हो भन्‍ने तिमीहरूलाई लाग्छ? जब शैतान लाज नभएको हो भनी तिमीहरू सोच्छौ, तब तिमीहरूलाई आफ्‍ना वरपरका त्यस्ता मानिसहरूका बारेमा घृणा हुन्छ जसले सँधै तिमीहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्, आफ्नो सामाजिक स्थिति र चाहनाहरूको निम्ति दुष्‍ट अभिलाषाहरू बोक्छन्? (हो।) त्यसो भए शैतानले मानिसलाई जबरजस्ती आफ्नो बनाउन र कब्जा गर्न कस्ता विधिहरू अपनाउँछ? के तिमीहरू यस विषयमा स्पष्‍ट हुनुहुन्छ? जब तिमीहरू “जबरजस्ती कब्जा” र “आफ्नो बनाउने” यी दुई शब्दहरू सुन्छौ, तब के तिमीहरूलाई घृणा महसुस गर्छौ र यी शब्दहरूका दुष्‍टताको भावलाई अनुभूति गर्न सक्छौ। शैतानले तेरो सहमति वा तेरो जानकारी विना नै तँलाई आफ्नो बनाउँछ, तँलाई जबरजस्ती कब्जा गर्छ, र तँलाई भ्रष्‍ट बनाउँछ। तैँले आफ्नो हृदयमा के कुरा अनुभूति गर्न सक्छस्? के तँ घृणा र तिरस्कारको महसुस गर्छस्? (हो।) जब शैतानका यस्ता कार्यहरूप्रति तँलाई घृणा र तिरस्कारको महसुस हुन्छ तब तँमा परमेश्‍वरप्रति कस्तो अनुभूति हुन्छ? (कृतज्ञता।) तँलाई मुक्ति दिनुभएको निम्ति परमेश्‍वरप्रति कृतज्ञता। त्यसो भए अब, अहिले यस क्षणमा, के तँ आफूसँग भएका सबै थोक र आफू जो होस् त्यसलाई परमेश्‍वरले पूर्ण रूपमा लिनुभएको र नियन्त्रण गर्नुभएको चाहन्छस्? (चाहन्छु।) तैँले यस्तो जवाफ कुन सन्दर्भमा दिन्छस्? के शैतानले तँलाई जबरजस्ती कब्जा गर्छ र आफ्नो बनाउँछ भनी डराएर नै तैँले “हुन्छ” भन्छस्। (हो।) तँसँग यस्तो किसिमको मानसिकता हुनु हुँदैन; यो सही कुरा होइन। तँ नडरा, किनकि परमेश्‍वर यहाँ हुनुहुन्छ। डराउनुपर्ने कुनै कुरा छैन। तैँले शैतानको दुष्‍ट सारलाई बुझिसकेपछि, तँमा परमेश्‍वरको प्रेम, परमेश्‍वरको असल अभिप्राय, परमेश्‍वरको करुणा, मानिसप्रति उहाँको सहिष्णुता, उहाँको धर्मी स्वभावका विषयमा सही बुझाइ वा गहन वास्ता हुनुपर्छ। शैतान अत्यन्त घृणित छ, तैपनि यदि यसले अझै पनि परमेश्‍वरको लागि तेरो प्रेमलाई र परमेश्‍वरमाथिको तेरो निर्भरता र भरोसालाई उत्प्रेरित गर्दैन भने तँ कस्तो किसिमको व्यक्ति होस्? के तँ त्यसरी आफूलाई शैतानद्वारा हानी पुर्‍याउन दिन इच्छुक छस्? शैतानको दुष्‍टता र घृणितपनलाई हेरिसकेपछि, हामी फर्केर परमेश्‍वरमा नजर लगाउँछौं। के परमेश्‍वर सम्बन्धी तेरो ज्ञानमा कुनै परिवर्तन आएको छ? परमेश्‍वर पवित्र हुनुहुन्छ भनी के हामी भन्‍न सक्छौं? परमेश्‍वरमा कुनै दोष छैन भनी के हामी भन्‍न सक्छौं? “परमेश्‍वर अद्वितीय पवित्रता हुनुहुन्छ”—के परमेश्‍वर यो पदवी अनुसार जिउन सक्‍नुहुन्छ? (सक्‍नुहुन्छ।) त्यसैले संसार र सबै थोकहरूका बीचमा मानिससँग भएको परमेश्‍वर सम्बन्धी यस बुझाइ बमोजिम जिउन सक्‍ने व्यक्ति केवल परमेश्‍वर मात्र हुनुहुन्‍न र? के अरू पनि छन्? (छैन।) त्यसैले परमेश्‍वरले मानिसलाई साँच्‍चै के कुरा दिनुहुन्छ? के उहाँले तँलाई थाहा नहुने गरी अलिकति मात्र वास्ता, सरोकार र दया दिनुहुन्छ? परमेश्‍वरले मानिसलाई के कुरा दिनुभएको छ? परमेश्‍वरले मानिसलाई जीवन दिनुभएको छ, मानिसलाई सबै थोक दिनुभएको छ, र मानिसबाट कुनै कुराको माग नगरिकन, कुनै पनि गोप्य अभिप्राय नराखिकन निसर्त रूपमा यी सबै कुराहरू मानिसलाई दिनुभएको छ। उहाँले मानिसलाई अगुवाइ गर्न र मार्गदर्शन दिन सत्यता, आफ्नो वचनहरू, र आफ्नो जीवन प्रयोग गर्नुहुन्छ, मानिसलाई शैतानको हानिबाट टाढा ल्याउनुहुन्छ, शैतानको परीक्षा र बहकाउबाट टाढा ल्याउनुहुन्छ, मानिसलाई शैतानको दुष्‍ट स्वभाव र घृणित मुहार देखाउनुहुन्छ। के मानिसको निम्ति परमेश्‍वरको प्रेम र वास्ता साँचो हो? के यो तिमीहरू प्रत्येकले अनुभव गर्न सक्‍ने कुरा हो? (हो।)